Usoro Kovid-19 na mgbe ụlọ ọrụ nchekwa na World na Turkey | RayHaber | raillynews
HomeGeneralUsoro Kovid-19 na mgbe ọ rụchara ụlọ ọrụ nchekwa na World na Turkey
23 / 05 / 2020 General, Isi akụkọ, agbachitere, Turkey
Kovid na mgbe emechara usoro na Turkey na ụwa na ụlọ ọrụ nchekwa
Onye isi ala nke Onye isi nchekwa nke Onye isi ala. Dr. Ismail Demir, STM Defense Technologies Engineering na Trade AŞ na-eche tankịkọnụ nhazi nzukọ vidiyo nke STM Think Tech, "usoro Kovid-19 na mgbe ụlọ ọrụ nchekwa na World na Turkey" sonyere na ngalaba ahụ.
Onye isi ala Prof. Dr. İsmail Demir kwuru na a hụla usoro pụrụ iche na ụwa n'ihi ntiwapụ ahụ, ọnọdụ akụ na ụba nke mba a emetụtala ọnọdụ a, na teknụzụ mmepụta arụpụtala ngwa ngwa, mana n'ihi usoro ọrụ dị iche iche na ụlọ ọrụ nchekwa, a ewerela usoro ụfọdụ na ọrụ ahụ na-aga n'ihu. Na mgbakwunye, o kwuru na ụlọ ọrụ ndị na-arụ ọrụ na ngalaba Defence Mmepụta gosipụtara ezigbo ihe atụ nke ojiji nke ọtụtụ teknụzụ n'oge a ma kwuo ọrụ ndị rụrụ na ASELSAN.
N’imesi ike na enyere ule nke ọma n’usoro a, Onye isi ala Prof. Dr. Ọ kọwara na ihe dịka iron, ihe nkpuchi, ngwa nchọpụta ọrịa na ọgwụ ndị na - efe ọgwụ, agbagotere na ngalaba ahụike.
N'ịkọwapụta na ọrụ ndị a na-aga, o kwuru, sị: “Enwere ike igbu oge n'inweta ihe ụfọdụ dị mkpa, mana anyị anaghị atụ anya na nke a ga-egosipụta ngbanwe njedebe afọ a. Enwere ike nwe obere pasent n'otu ụlọ ọrụ. Anyị agaghị enwe nsogbu ọ bụla gbasara ntụgharị. Usoro a ga-enyere ezigbo aka maka ọnọdụ Turkey, o nyekwara ya nkwado ihe oyiyi nke obodo ahụ ogologo oge anyị na-atụ anya na mmetụta dị mma nke mbupụ. "
Onye isi ala Prof. Dr. Ismail Demir, onye ozo ndi ozo noo nke Turkey enweghi ike dika ndi n’enweputa ihe nlere bu nke dọtara uche n’ebe ndi ozo, jiri ahịrịokwu ndị a:
“N'ebe a, ikike teknụzụ, arụ ọrụ nke ngwaahịa, ike ịzụ ahịa na njikwa nghọta bụchaghị otu. N'akụkụ a, Turkey malitere ịpụta na ahịa ụwa n'akụkụ nke ọzọ dịka onye ọkpụkpọ iji jupụta ebe China. Ugbu a, anyị nọ na ngalaba nke gosipụtara onwe ya dịka obodo, n'echiche a iji dochie ọtụtụ mba anyị na-ebubata ọdịnala na ọdịnala, gụnyere China enwere ike. "
Mmụba na mbupụ na Turkey ugbu a Onye isi ala kwupụtara olile anya na eserese nke usoro gafere ọtụtụ Prof. Dr. Demir kwuru na ya kwenyere na ya ga-apụta ọ bụghị dịka mmebi nke mba ahụ mebiri emebi, kama dịka mba nke merela njikere ime ihe ga-aga nke ọma na usoro ahụ.
"Enweghị nkagbu ma ọ bụ yigharịrị n'ọrụ a"
Onye isi ala Prof. Dr. İsmail Demir kwuputara na onweghi nkagbu ma obu ndochi ya n’ọrụ ngozi, ya na omumu ihe ndi n’iru n’iru oru dika osooso ma obu igbusi ugha ufodu ahia, na ha kpachara anya banyere ngwa ahia di ire.
O kwusiri ike na nchekwa nke obodo bụ ihe owuwu nwere ọtụtụ, na ụwa na-ahụkwa nke a site na ntiwapụ ọrịa.
F35 oru ngo
Onye isi ala Prof. Dr. İsmail Demir kwuputara oru F35 n’okwu ya ma kwuo na enweghị data doro anya gbasara ihe na-eme n'akụkụ US.
Ọ na-adọrọ uche gaa n'eziokwu ahụ bụ na Turkey bụ onye mmekọ nke ọrụ ahụ gara n'ihu. “Mmeghari akaghi aka metụtara mmekorita a enweghi usoro iwu ma obu ihe ekwenyeghi ekwenye. N'iburu n'uche usoro njikọta na ndị mmekọ niile, enweghị ntọala maka ijikọ nzọụkwụ a na S400. Ọ bụghị ụkwụ iji mee mkpebi gbasara ụgbọ elu gaa Turkey, mana nke ọzọ bụ ihe na-esite na ya enweghị ihe ọ ga-eme. Ọ bụ ezie na anyị gwara ya ugboro ugboro n'etiti ndị anyị na-etinye iwu ma anyị enwetaghị azịza ezi uche dị na ya, usoro ahụ gara n'ihu. N’okwu nke ya, na usoro a, ekwuru na ọrụ ahụ nwere ọnụ ahịa ọzọ dịkarịa ala nde $ 500-600. Ọzọ, dịka anyị tụkọtara si kwuo, anyị na-ahụ na enwere ụgwọ ga-efu karịa opekata mpe ijeri $ 8-10 n'otu ụgbọelu. "
Onye isi ala Prof. Dr. Ismail Demir, na-arutu aka na fighter banyere F35 ka ọ bụrụ ozi doro anya na Turkey kwuru na Turkey ga-arapara na ngosipụta mbinye aka ya dị ka onye na-akwụsi ike n'akụkụ ya na usoro a. Turkey na ndị ọrụ ibe ya na mmemme ọrụ a ga-akwụsị ma a na-enye usoro Turkey n’ụbọchị ọ ga-anabata akparamagwa ịkọwa na ha ga-emezu ọrụ ya na ụlọrliyormuşça mgbe niile hụrụ nyocha a:
“Anyị na-ahụ abamuru nke nke taa. Machị 2020 bụ ụbọchị a kara aka, ụbọchị gafere ma ụlọ ọrụ anyị na-aga n'ihu n'ichepụta ihe. Ozugbo 'm tụbara, m bee eriri ugbu a, m wepụrụ ndị Turkey' adịghị mfe. Ha mekwara mkpebi a, agbanyeghị n'eziokwu na ndị isi US kwuru maka ntinye aka nke ụlọ ọrụ Turkey na mmekorita a na gburugburu ebe dị iche iche, gbasara arụmọrụ ụlọ ọrụ anyị, ụdị mmepụta ya, ọnụ ahịa ya na oge nnyefe ya. Anyị hụrụ na ikike nke ndị na - emepụta anyị, ọ nweghị ndị ọhụụ dịịrịghị mfe. Anyi na-aga n’ihu mmekorita anyi. Nwara ịchụpụ anyị, anyị anaghị ezu ike, dịka anyị na-akwụsị mmepụta anyị, anyị agaghị aga. Maka na ọ bụrụ na enwere nkwekọrịta ọfụma, ọ bụrụ na ọpụpụ, anyị kwenyere na ndị mmekọ ndị malitere ga-aga n'ihu kwesịrị ntụkwasị obi. Nke a bụ mkpebi anyị dịka mba na steeti. Anyị kwenyere na echiche a ziri ezi. ”
Azụmahịa okporo ígwè Czech dị mma ka e gosipụtara na Eurasia Rail 2014
Anyị bụ ugbu a na Ahịa Ahịa Ahịa
Ụlọ ọrụ Konya ga-emepụta tram
Okporo ígwè Ihe: N'ihi na okporo ígwè Transport Sector na Turkey na Turkish Industry ...
Minista Elvan na Toptaş'dan n'arụ ọdụ ụgbọ okporo ígwè
Ụlọ ọrụ Sivas ga-eto na ugbo ala
A ghaghị ijikọta ụlọ ọrụ na-ahụ maka ịzụ ahịa na oké osimiri site n'ọdụ ụgbọ okporo ígwè
Türkoğlu Logistics Center Ga-arụ ọrụ Kahramanmaraş ọrụ ga-eme mgbanwe
Maps nke Eskişehir Industry
Turkey's Blue Bayraklı Ọnụ ọgụgụ osimiri na-amụba! # 3 na .wa
Ejiri Nlekọta Kovid-19 na Mfefe Ndị njem n'okporo ụzọ!